China AC Kuchaja US / 48A (11.5KW) Kugadzira uye Fekitori | Joint Tech
AC Kutengesa US / 48A (11.5KW)
Stylish yakasimba dhizaini
Kusvikira ku48A @ 240V
Max. ouput simba: 11.5kw
IK08, IP65 ye
mukati / kunze
OCPP 1.6J (2.0 inoenderana)
4.3 '' LCD sarudzo
4G SIM kadhi
Isina mvura LAN interface
chivhariso uye 18ft tambo
Muenzaniso Zita EVC10-03C1C EVC10-07C1C EVC10-09C1C EVC10-11C1C
Inzwa Zvinotaurwa 16A 32A 40A 48A
Kubuda Ikozvino 16A 32A 40A 48A
LAN (kusarudza) + 4G (kusarudza) kana Wi-Fi (kusarudza)
OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 inoenderana)
18ft kuchaja tambo (25ft kuchaja tambo kusarudza)
Pamusoro pazvino, Pasi pemagetsi, Pamusoro pemagetsi, Residual yazvino, Kuchengetedzwa kwekudzivirira,
Ipfupi redunhu, Kupfuura tembiricha, Ground mhosva, Yazvino leakage dziviriro
Iyo network inoita kuti kuchaja kuve smart:
1.Pakarepo Dzokorora & Notifcations
2. Kuchaja Chiteshi Locator
3. Kiredhiti Kadhi Yakagoneswa
4. Sustainability Reports
5. Pamhepo Bhiri Bhadhara
6. Kutengesa Mamiriro
7. Kubhadhara-Mahara Kwevatengi Rutsigiro
8. Smart Nhare Kunyorera
9. Smart Kadhi Kuvimbiswa
10. Yakachengeteka Pinda-mukati
2. Chigadziko chimwe chete
3. Chigadziko chekudzokera shure
4. Back-to-back pedestal ne cable management system
5. Dual side-to-side tambo manejimendi system
Remote kutanga uye kumira
Iwe unogona kushandisa yako foni app kutanga kana kumisa kuchaja.
Kuti udzivise makwiriro uye chengetedza pamutengo wekuchaja, unogona kuchengetedza nguva yekuchaja kuti ubhadhare mota kana mutengo wemagetsi uri wakachipa
Wall yakamisikidzwa 7KW Chikamu 2 AC EV Chaja Chiteshi
Chizvarwa chemotokari yemagetsi chasvika. Kambani yako yakagadzirira icho here? Iine JNT-EVC10 Series Yekuchaja Chiteshi, iwe unenge uine yakakwana plug-uye-yekutamba mhinduro inochinjika yekugarisa vese vari pa-saiti vashanyi uye ako fleet emagetsi mota.
JNT-EVC10 motokari yemagetsi yekuchaja zviteshi zvakavakirwa network-yakagadzirira kumashure-kumagumo manejimendi uye inouya yakajairwa neRFID kadhi kuverenga kwevashandisi. Iine akasiyana ergonomic dhizaini, inogona kuiswa kumadziro kana chigadziko ichipa akasiyana mutero wazvino. JNT-EVC10 inokutendera kuti uwedzere nyore nyore magetsi emagetsi kuchaja sechibatsiro chakawedzerwa kune vanogamuchira vaeni, mahofisi, mamasipala, uye zvimwe zvakawanda zvekutengesa zvinhu.
Yakavakwa network-yakagadzirira (LAN, 4G, kana Wi-Fi) kuti ubatanidze kune wechitatu-bato OCPP-inoenderana manejimendi software.
Rusvingo kana kumira-wega zvigaro zvekumisikidza zvinoshanda mukati medunhu rako redunhu kudzikisa kuisa mari.
Yakachengeteka RFID kuvimbiswa inobvumidza kuwana kune EV madhiraivha.
Standard SAE J1772 ™ plug inoenderana neyakawanda-emagetsi uye emahara mota dzemagetsi.
1. Stylish yakasimba dhizaini Kusvika ku32A @ 400V Max. ouput simba: 22kw
2.Network yekubatanidza OCPP 1.6J (2.0 inoenderana)
3. Nyora A + DC6mA
4. Mvura isina mvura LAN interface
5. IEC 62196-2 kuchaja plug uye 5m tambo kana socket
6. IK08, IP65 yemukati / yekunze
7. 4.3 '' LCD sarudzo
8. 4G SIM kadhi Emergency kumira
Yakakura LCD uye refu tambo:
Yakakura LCD kuratidza data rese remotokari pachiteshi chekuchaja panguva yekuchaja. Unogona kuona mamiriro ekuchaja, kusanganisira zvazvino, magetsi uye tembiricha. Iyo screws inokwana mubhokisi saka haufanire kunetseka nezve iyo skrini inodonha. Iyo tambo yemamita 7.5 inosiya nzvimbo yakakwana pakati pemotokari yako nechaji yekuchaja.
Kuenzanisa uye kuchengeteka:
Chiteshi chine leveler yemagetsi inoenzanisa chiteshi kana iyo yakawanda yemagetsi mudziyo iri kushanda.
Nekudaro chiteshi chinogona kushanda pasi pesimba razvino, tichidzivirira kuzorora uye dzimwe njodzi dzekuchengetedza dzinokonzerwa nekusagadzikana kwazvino.
Zvese zvigadzirwa zvedu zviri CE, mhando ndeyechokwadi. Yedu charger yeEV inoenderana nemagetsi akawanda emagetsi anoenderana neIEC 62196-2 standard.
Pashure: DC Kutengesa CE20KW
Zvadaro: AC kuchaja CE / 7KW
AC Kutengesa US / 40A (9.6KW)
AC kuchaja CE / 7KW
AC kuchaja CE / 22KW
AC Kutengesa US / 32A (7.6KW)
AC Kutengesa US / 16A (3.6KW)
AC kuchaja CE / 2 × 22KW
Runhare: +86 0592 7016582